Sergio Busquets oo diiday in la isla barbardhigo Tababarihii hore ee Barcelona Ernesto Valverde iyo midka cusub ee Quique Setien – Gool FM
(Barcelona) 20 Jan 2020. Sergio Busquets ayaa diiday in la isla barbardhigo tababarihiisii hore ee Ernesto Valverde iyo hoggaamiyaha talada kooxda la wareegay dhawaantan ee Quique Setien kaddib guushii Barcelona ay 1-0 uga gaartay Granada.
Guuldarradii Spanish Super Cup ee ka soo gaartay Atletico Madrid 10 maalmood ka hor ayaa dhalisay in Barcelona ay ceyriso Valverde oo ay ku badasho tababarihii hore ee Real Betis, Quique Setien.
61-sano jirkaan ayaa wayihiisa macallinimo ee kooxda Barcelona ku bilaabay guul ay Barca ku gaartay garoonkeeda Camp Nou, kuna heshay saddex dhibcood oo nadiif ah, waxaana xusid mudan in kooxdiisa cusub uu ka dhigay mid ku raaxaysanaysay kubadda oo inta badan kubad haysashada ku wanaagsanayd, tiyoo ay jirto inuu kabtanka kooxda ee Lionel Messi uu dhaliyay goolkiisii 12-aad dhammaan kulammada uu ka uu ka hor tagay kooxda Granada.
Kaddib kulanka ayuu kabtan ku xigeenka kooxda Barcelona ee Sergio Busquets tilmaamay inay qasab tahay in aan la isla barbardhigi karin labada hoggaamiye ee kala ah macallinkii hore ee kooxda laga cayriyay ee Ernesto Valverde iyo hoggaamiyaha talada kooxda la wareegay dhawaan ee Quique Setien.
“Looma baahna in la isla barbardhigo labada hoggaamiye.” ayuu ciyaaryahanka khadka dhexe ee Busquets u sheegay war sidaha reer Spain ee AS.
“Tababaraha kasta wuxuu leeyahay qaabkiisa iyo fikirka uu ka haysto kubadda cagta, waad arki doontaa wixii Setien na faray inaan sameyno kulan walba.
“Ma doonayo in aan shaaciyo waxa uu ina faray macallinkeenna cusub, kulana waxaan xakamaynay kubadda, waxaanan soo saameynay fursado badan, hoggaan ahaanna waan ku faraxsanayn wax walba oo uu ahaa Ernesto, sidoo kale iminka aad ayaan ugu faraxsannahay Quique Setien.” ayuu hadalkiisa ku sii daray raaca dhisaha Kooxda Barcelona ee Sergio.
Barcelona ayaa kulankii xalay ay wajahday Garanada gacanta ku haysay ciyaarta inteeda badan, iyadoo ay wiilasha Barca abuureen fursado badan oo dahabi ahaa, balse aan gool loo badalin ka hor inta uusan Messi goolka guusha lugta midig ku dhalin kulanka.
Barcelona ayaa ugu dambeyn guul ku soo dhaweysay macallinkooda cusub ka gadaal markii uu Messi shabaqa soo taabtay daqiiqadii 76-aad, wax yar kaddib markii daafaca Granada casaan loo taagay, si uu Barca ugu soo celiyo hoggaanka horyaalka La Liga maadaama ay farqiga goolasha kaga sarreyso Real Madrid.